ချို ပေါ့ ကျ (၁၀) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » ချို ပေါ့ ကျ (၁၀)
ချို ပေါ့ ကျ (၁၀)
Posted by black chaw on Apr 27, 2012 in Aha! Jokes, Satire, Creative Writing, Editor's Choice, Opinions & Discussion, Photography, Travel | 87 comments
Marketing သိတ်အရေးကြီးပါတယ် ကျောင်းဒကာ။
နားလည်ထား၊ သိထားရင် မမှားဘူးပေါ့ဗျာ။ ကုန်ပစ္စည်းလိုက်ဖြန့်နေမှ Marketing သိဖို့လိုတာမဟုတ်ပါဘူး။
ဆိုက်ကားသမားတွေလည်း Marketing အကြောင်း အကြမ်းဖျင်းတော့သိထားရင် ကောင်းတာပါပဲဗျာ။
ဘလက်ချော ဆိုတဲ့ကောင် နင်းတဲ့ဆိုက်ကားများ တော့ ဘယ်တော့မှ မစီးနဲ့ဟေ့။ ဘယ့်နှယ့်ရှင် ဈေးခြင်းတောင်းလေး ကူသယ်ခိုင်းတာ စောင့်ကြီးအောင့်ကြီးနဲ့။ ဆိုက်ကားနင်းနေတာကို လေယဉ်မောင်းနေရတယ်များ မှတ်နေလားမသိဘူး။
မနက်မိုးမလင်းသေးဘူး အရက်ကလည်း သောက်ထားပြီ။
ပေါက်ဖေါ်လေးတို့ဆို ခိုင်းစရာတောင်မလိုဘူး။ အန်တီ ဘာကူသယ်ပေးရမလဲ ဆိုတာချည်းပဲ။ နောက်ကို ပေါက်ဖေါ်နင်းတဲ့ ဆိုက်ကားပဲ စီးတော့မယ် ဒါဗျဲ။
ဆိုက်ကားနင်းတာတောင် အလိုက်သိ ဖင်ပေါ့တဲ့လူနင်းတဲ့ ဆိုက်ကားမျိုးကို လူတွေက ရွေးစီးချင်ကြပါတယ်။
ဒီနေရာကနေ ဟိုနေရာကို နင်းပို့ပြီး ပေးဆိုက်ကားခ ဆိုရုံလောက်နဲ့တော့ အောင်မြင်တဲ့ ဆိုက်ကားသမား တစ်ယောက်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ကျောင်းဒကာ။
သွား ၃၂ ချောင်းပေါ်အောင် ဖြဲပြထားတဲ့ အပြုံးရယ်၊
အန်တီ ဘာကူသယ်ပေးရမလဲဆိုတဲ့ အပို ၀န်ဆောင်မှုရယ်၊
ဆိုက်ကားစီးတဲ့သူ ကျေနပ်ပီတိဖြစ်စေမယ့် မြှောက်ပင့်ပြောဆိုမှုလေးတွေရယ်၊
(ဥပမာ – အရမ်းဝနေတဲ့ မိန်းမကြီးတစ်ယောက်ကို
“ ဟာ အစ်မကြီး မတွေ့တာသိတ်မကြာသေးဘူး ပိန်သွားတယ်နော် “
ဆိုတဲ့ သည်းခြေကြိုက်စကားမျိုး။ အာဟိ )။
ပါနိုင်ရင် ပို အဆင်ပြေမယ်ပေါ့ဗျာ။
ဆိုက်ကားနင်းတဲ့လူခြင်းအတူတူ ဆိုက်ကားသမား ဘလက်ချော ရဲ့ image က တစ်မျိုး၊
ဆိုက်ကားသမားပေါက်ဖေါ်ရဲ့ image က တစ်မျိုး၊
ဆိုက်ကားသမား ကရင်စည် ရဲ့ image ကတစ်မျိုးပါ။
တစ်ယောက်ခြင်းစီရဲ့ လူချစ်လူခင်ပေါပုံခြင်း မတူညီနိုင်ပါဘူး။
အဲဒီတော့ ဆိုက်ကားနင်းတဲ့လူတောင် Brand Building ပိုင်းနားလည်ရင် ပို အောင်မြင်မယ်ပေါ့ဗျာ။
မရယ်ပါနဲ့ ကျောင်းဒကာ။ အတည်ပြောနေတာပါ။
ဘလက်ချောကလည်း ဘလက်ချော Brand ကို ကိုယ့်အပြုအမူ အပြောအဆိုတွေနဲ့ တည်ဆောက်ရပါတယ်။
ဆိုက်ကားနင်းရင်း အရက်သောက်ထားရင် ပိုဆိုးသေး။
ဘလက်ချော ဆိုက်ကားစီးရင်း ခေါင်းတောင်မူးတယ်၊ အရက်နံ့ကို ဟောင်နေတာပဲ
ဆိုတဲ့ မှတ်ချက်မျိုး အချခံရပြီဆိုရင် ဘယ်လာ ကောင်းတော့မလဲ ကျောင်းဒကာရယ်။
ပေါက်ဖေါ်ကလည်း ပေါက်ဖေါ်ဆိုတဲ့ Brand ကို သူ့အပြုအမူ အပြောအဆိုတွေနဲ့ တည်ဆောက်ရပါတယ်။
ဆိုက်ကားနင်းရင်း စီးလာတဲ့ မိန်းမပျိုလေးတွေကို ဖွန်ကြောင်တတ်ရင် သေပြီဆရာပဲ။
ပေါက်ဖေါ် နင်းတဲ့ ဆိုက်ကားများတော့ ဘယ်တော့မှ မစီးနဲ့ သမီးရေ။ ရှောင်သာရှောင်။ ဟိုတစ်နေ့က ၀တ်မှုန်ရွှေရည်လေးကို လက်ဆွဲပြီး ရည်းစားစကားပြောလို့တဲ့။
ဆိုတဲ့ မှတ်ချက်မျိုး အချခံရပြီဆိုရင်လည်း ဘယ်ကောင်းပါတော့မလဲ ဗျာ။
ဆိုက်ကားသမားမှာတောင် ကိုယ်စီးလို့ အဆင်ပြေတဲ့ ဆိုက်ကားနဲ့ ကိုယ်သိတ်မစီးချင်တဲ့ ဆိုက်ကားဆိုတာ ရှိသေးတယ်ဗျ။
အော် တော်တော် မြင့်တဲ့ ဘိဇနက် အကြောင်းဆွေးနွေးမိနေတာကိုး ဟိုးဟိုး…။
ဘယ်လိုကိစ္စမျိုးမှာမဆို Marketing အကြောင်းနားလည်ထားဖို့ ဆိုတာလေး… ဟေးဟေး။
ထားလိုက်ပါဗျာ။ ဆိုက်ကားနင်းတဲ့ ကိစ္စကြီးက ကျွန်တော်တို့နဲ့ ဝေးလွန်းပါတယ်။
မန်းလေး ဂဇက်မှာ စာရေးတဲ့ ကိစ္စဘက်လှည့်ရအောင်ပါ။
မန်းဂဇက်မှာ ကျွန်တော် စာရေးချင်လို့ စာရေးပါတယ်။
ကလောင်နာမည်ပေးရပါတယ်။ ဘလက်ချော ပေ့ါဗျာ။ ကုမ္ပဏီနာမည်သဘောပေါ့။
ကျွန်တော်တို့ ရေးတဲ့ ပို့စ်တွေ က ကျွန်တော်တို့ BRAND တွေပေါ့။
အဲဒီ ဘလက်ချော ကုမ္ပဏီထုတ် BRAND မျိုးစုံပေ့ါဗျာ။ ရွာသူရွာသားတွေ ကြားထဲမှာ Launching လုပ်ရပါတယ်။ သူတို့အတွေးထဲမှာ impression လေး ရှိလာစေဖို့ ကျွန်တော် တည်ဆောက်ရပါတယ်။ ဘယ်လမ်းကြောင်းလေးနဲ့ သွားမလဲ ဆိုတာကိုလည်း ရွေးရပါတယ်။ ဥပမာ – ဆူး စိတ်ကူး ဆိုတဲ့ BRAND မျိုးပေ့ါ။ ကိုပေါက် လက်ဆောင် အတွေးပါးပါးလေး ဆိုတဲ့ BRAND မျိုးပေါ့။
ကျွန်တော်ပထမဆုံး ဂဇက်တံခါးစောင့်ကြီး ဆိုတဲ့ BRAND လေးတစ်ခုကို ရွာထဲမှာ ချပြပါတယ်။ မဆိုးဘူးပေါ့ဗျာ။ လူနည်းနည်း သိတယ်ပေါ့။ နောက် အခု ချိုပေါ့ကျ ဆိုတဲ့ BRAND လေးကို ထပ်ကြိုးစားကြည့်တဲ့အခါ နည်းနည်း လက်ခံကြတယ်ပေါ့။ ကုန်ပစ္စည်းတွေမှာ ကိုယ်ပိုင် image ရှိကြသလို ကလောင်နာမည်တွေမှာလည်း ကိုယ်ပိုင် image လေးတွေ ရှိကြပါတယ်။
ဥပမာ – ဘလက်လေဘယ် အရက်ကို သောက်ရင်ခေါင်းမကိုက်ဘူး ဆိုတာမျိုးပေါ့။ (ဥပမာပေးတာကိုက အရက်နာမည်နဲ့)
ဟိုတစ်နေ့က ဂီဂီပြောတဲ့ BRANDING is PROMISING ဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာ။
လူတွေလက်ခံပြီး ဈေးကွက်ဝင်နေတယ်ဆိုတာလေးနဲ့ ဖရီးရိုက်နေလို့လည်း မဖြစ်သေးပါဘူး။
ဈေးကွက်မှာ ကိုယ့် ကုန်ပစ္စည်းရဲ့ အလားအလာကိုလည်း ခန့်မှန်းတွက်ချက်ရပါသေးတယ်။ ပြိုင်ဘက်တွေက အများကြီးကိုး နော်။ ရောင်းအားကျလာရင်လည်း ဘာကြောင့်ရောင်းအားကျလာသလဲဆိုတာကို တွက်ချက်ပြီးတော့ ရောင်းအားပြန်တက်အောင် ကြိုးစားရပြန်တယ်ပေါ့။ အဲဒီမှာ ဆာဗေး အရေးကြီးပြန်တယ်။
အဲဒီတော့ ဆာဗေးလေးတွေနဲ့ ကိုယ့် BRAND ကို ဈေးကွက်မှာ ဘယ်လောက် ရာခိုင်နှုန်းချုပ်ကိုင်ထားနိုင်သလဲ၊ ပြိုင်ဘက် Brand တွေက ဘယ်လို ပရိုမိုးရှင်းတွေနဲ့ ဈေးကွက်ကို ထိုးဖေါက်နေသလဲ ဆိုတာမျိုးတွေကို အမြဲတမ်း လေ့လာနေဖို့လိုပါတယ်။
ရေရှည်အတွက်ကို ပြောတာပါ ကျောင်းဒကာ။
ကဲ ပြောရင်းနဲ့ ဝေ့နေပြီဗျာ။
အဓိကအကြောင်းအရာက Marketing နေရာတိုင်းမှာ အရေးကြီးတယ်ဆိုတာလေးပါ။
မာကက်တာ ဂီဂီ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာလို့ မားကက်တင်း အရေးကြီးကြောင်း ဂုဏ်ပြု ရေးသားလိုက်ပါတယ်။
ဗရမ်းဗတာ မာကက်တာ ဘလက်။
နေအောင် ရဲ့ သင်္ကြန်တွင်း သမ္မတအိမ်တော်သွားတောလား (နံနက်ခင်း)
ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးနေအောင်ဟာ နေပြည်တော်သင်္ကြန်မှာ သီချင်းဆိုခဲ့ပြီး အနုပညာရှင်များကို နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်မှ ချီးမြှင့်ခဲ့သောဆုငွေအား လူမှုအသင်းအဖွဲ့များသို့ ပြန်လည်လှူဒါန်းပွဲကို တက်ရောက်လာပါတယ်တဲ့ ဦးလေးရေ။ အဲဒီမှာပဲ နေပြည်တော် သင်္ကြန်အကြောင်းကို နေအောင် ကြီးက ဒီလိုပြောပြပါတယ်တဲ့။
နေပြည်တော်သင်္ကြန်ရဲ့ ထူးခြားချက်ဆိုရင် တစ်ရက် ကျွန်တော်တို့ဖျော်ဖြေနေတုန်း ကားတစ်စီးရောက်လာတယ်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးရဲ့အိမ်တော်ဝင်းမှာ သွားရောက်ဖျော်ဖြေရမယ်လို့သိရတယ်။ ကျွန်တော်က အရင် သမ္မတအိမ်တော်တွေတော့ ရောက်ဖူးတယ်။ နေပြည်တော်က သမ္မတအိမ်တော်ကိုတော့ မရောက်ဖူးသေးဘူးလေ။ ကိုယ့်နိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်နေတဲ့မင်း။ သမ္မတရဲ့အိမ်တော်ကိုသွားရမယ်ဆိုတော့ ပျော်တာပေါ့ဗျာ။ ကောင်းလိုက် ခမ်းနားလိုက်တာဗျာ။ သမ္မတကြီးကိုယ်တိုင် ကျွန်တော်တို့ အနုပညာရှင်တွေကို ရင်းရင်းနှီးနှီး နှုတ်ဆက်တယ်။ ပြီးလည်းပြီးရော တောင်းကြတယ်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဆိုတာ အများကြီးချီးမြှင့်နိုင်တယ်။ တောင်း ဆိုတာကို ကလေးတွေက ကြောက်နေကြတယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း အခြားလူကြီးတွေနဲ့ စကားပြောနေတော့ မပြောလိုက်ရဘူး။ မဟုတ်ရင် ဒီထက်အများကြီးတောင်းလို့ရတာပေါ့။ အဲဒါဆို ကျွန်တော်တို့လည်း ဒီထက်ပိုပြီး လှူနိုင်တယ်လေ။ ကလေးတွေက မတောင်းလိုက်တော့ ခုလောက်ပဲလှူနိုင်တာပေါ့ဗျာ။ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကိုယ်တိုင် ဆုတွေပေးပြီး ကျွန်တော်တို့ကို ရေလောင်းတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကလည်း သမ္မတကြီးကျန်းမာပါစေလို့ ပြန်ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့မင်း ကျန်းမာချမ်းသာမှ တိုင်းသူပြည်သားတွေ စီးပွားရေးတွေတိုးတက်ကောင်းမွန်မှာ။ ဟိုဟာကောင်းတယ်။ ဒီဟာမကောင်းဘူး မပြောကြပါနဲ့တော့။ တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့ဆိုတာ လူတစ်ဦးချင်းစီမှာတာဝန်ရှိတယ်။ အုပ်ချုပ်သူကိုချည်းမပြောနဲ့
အဲလိုကြီးကို ပြောသွားတာဗျာ။ မှတ်သားလောက်စရာတွေပါဗျာ။ ပြောရင်းဆိုရင်း နည်းနည်းများအရှိန်လွန်သွားသလားလို့။
ချက်ခြင်းကြီးကို အုပ်ချုပ်သူကိုချည်း မပြောနဲ့တွေဘာတွေ ဖြစ်သွားတော့တာပဲ…လူဆိုး။ အနုပညာရှင်မျိုးဆက်သစ်ကလေးတွေအနေနဲ့လည်း နောက်တစ်ခါ သမ္မတကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါ ဒီထက်အများကြီး တောင်းကြဖို့ ပြင်ဆင်ထားကြပါ လို့။
အော်များများတောင်းနိုင်ရင် များများလှူလို့ ရတာပေါ့ ကျောင်းဒကာရယ် ဟုတ်ဘူးလား။
ဆွိဝတ်ရည်သောင်းပြောတဲ့ Sexy Pose ဆိုတာ (Oasis ဂျာနယ်)
နှင်းဝတ်ရည်သောင်းတို့ အေးဝတ်ရည်သောင်းတို့ရဲ့ ညီမငယ်လေး ဆွိဝတ်ရည်သောင်းက Sexy Pose အကြောင်းပြောထားတာပါ ကျောင်းဒကာ။
Sexy Pose ဆိုတာ သာမန်လူတွေအတွက် မရှိလည်းဖြစ်ပေမယ့် Celebrity တွေအတွက်တော့ မရှိမဖြစ်ကို လိုအပ်ပါတယ်တဲ့။
အော် မှန်တာပေါ့ ခေးရယ်။ မြန်မာ Celebrity မလေးတွေ ရဲ့ Sexy Pose တွေ အမှန်တကယ်ကို လိုအပ်နေတာပါကွယ်။ အာဟိ။
ဆွိဝတ်ရည်သောင်းလေးရဲ့ Sexy Man က ဒီလိုတဲ့ဗျ။
ယောက်ျားလေးဆိုရင် ရုပ်ချောစရာမလိုဘူး။ (ဒါကတော့ ရွှေတိုက်စိုးနဲ့ ကွက်တိ)
အသားလည်း ဖြူစရာမလိုဘူး။ (အင်းဒါကတော့ ဘလက်ချောနဲ့ ကွက်တိ။ အသားမည်းကိုဗျ နော်)
အရမ်းကြီး Sexy ကျ စရာလည်းမလိုဘူး။ (ဒါကတော့ ကိုနိုဇိုးမိကြီးနဲ့ ကွက်တိ။ ဆက်စီကိုမဖြစ်တာပါ။ အာဟိ)
ယောက်ျားဆန်ဆန်နဲ့ ယောက်ျားပီသတဲ့ ပုံမျိုးဆိုရင် ကြိုက်တယ်။ (RGa လေး ရဲ့ ဘော်ဒီနဲ့ စတိုင်မျိုးပေါ့ဗျာ။)
ပြောရရင် သဘာဝပုံစံနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ပုံမျိုးကို သဘောကျတယ်။
(သဘာဝပုံစံဆိုလို့ ဟိုနေ့က ရွှေလီမှာသောက်ကြတုန်းက ကြောင်ဝတုတ်တစ်ယောက် ဘရာတောင် မ၀တ်ခဲ့ဘူး။
အော် ဆွိဝတ်ရည်သောင်းလေးတစ်ယောက် မန္တလေးဂဇက်က အစ်ကိုကြီးတွေ ဦးလေးကြီးတွေရဲ့ Sexy Pose တွေကို မြင်ရင်
ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရ ဖြစ်မှာ မြင်ယောင်မိသေး ဟေးဟေး။
မြန်မာရုပ်မြင်ဇာတ်လမ်းတွဲ အချစ်သင်္ကေတ လာပြီ (8 Days)
ရှောင်လို့ကို မလွတ်နိုင်တဲ့အရာတွေထဲမှာ ကိုးရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတွေက ထိပ်ဆုံးမှာနေရာယူနေတာ အတော်ကြာခဲ့ပါပြီ။
မြ၀တီကြည့်လည်း ကိုးရီးယား၊ MRTV ကြည့်လည်း ကိုးရီးယား၊ MRTV-4 ကြည့်လည်း ကိုးရီးယား၊ ဖမ်မလီ ကြည့်လည်း ကိုးရီးယား၊ စကိုင်းနက်ကြည့်လည်း ကိုးရီးယား။
ဘယ်တီဗီ စတေရှင် ကြည့်ကြည့် ကိုးရီးယားနဲ့ကို မလွတ်နိုင်ဘူး။
ပါဝါအပျော့နဲ့ နယ်ချဲ့ခြင်းကို မြန်မာတီဗီစတေရှင်တွေက ကျေကျေနပ်နပ်ကြီးကို ကျေနပ်လို့။
ဒီလောက်တောင်ဖြစ်လှတာ ရွှေတိုက်စိုး ရေ ကြုံရင် ကိုးရီးယားမ တစ်ယောက်လောက်ကောက်ယူပြီး ကလေးတန်းလန်းနဲ့ ထားခဲ့ပစ်လိုက်စမ်းကွာ။ ဒါမှ ရွှေမြန်မာတွေအကြောင်းကောင်းကောင်းသိသွားမှာ ဘာမှတ်နေလဲ။ ဒါလည်း ဖြစ်မယ်မထင်သေးဘူးဗျို့။ တော်ကြာ သူတို့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေလို ကလေးက အရွယ်ရောက်လာပြီး မြန်မာပြည်လာ၊ ကွဲနေတဲ့အဖေကိုရှာနေမှ အုပ်ထိန်းသူနဲ့ ပြသနာတက်နေဦးမယ်။ တကယ်သွားမလုပ်လိုက်နဲ့ဦးဗျ။
သတင်းအတည့်က ဒီလိုဗျ။ မြန်မာရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ အချစ်သင်္ကေတ ကို MRTV-4 ကနေ ပြသပေးတော့မယ်တဲ့။ ရိုက်ကူးသူ ဒါရိုက်တာက ကောင်းဇံ (MRTV-4)၊ ဇာတ်ဝင်တေးနဲ့ စာသားကို မြင့်မိုးအောင်က ရေးပေးထားပါတယ်တဲ့။ သရုပ်ဆောင်တွေကတော့ မျက်နှာသစ်တွေဖြစ်တဲ့ ဘုန်းထက်ရှိန်၊ ကောင်းမြတ်စံ၊ စိုးနန္ဒာကျော်၊ ၀င့်ယမုံလှိုင်တို့က အဓိက ပါဝင်ပါတယ်တဲ့။ ရန်ကျော်တို့ သန်းသန်းစိုးတို့ ဦးဇော်မှိုင်းတို့ ဦးဝင်းမြိုင်တို့ကလည်း ၀ိုင်းဝန်းပံ့ပိုးထားကြတယ်ပေါ့ဗျာ။ ကဲ ကိုးရီးယား ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကို ခုခံဖို့အတွက် မြန်မာဇာတ်လမ်းတွဲတွေ ဘယ်လောက် ထိုးဖေါက်နိုင်မလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့ ကျောင်းအစ်မရေ။ ဧပြီလ ၃၀ ရက်နေ့က စလွှင့်မယ်ဆိုတော့ သိတ်မဝေးတော့ပါဘူး။ မြန်မာရုပ်သံဇာတ်လမ်း ကမ္ဘာကိုလွှမ်းစေရမည်ပေါ့…။ ကမ္ဘာ့အဆင့်က နည်းနည်းမှ လျှော့မပေးနဲ့ ကျောင်းဒကာ။
သင်္ကြန်တွင်း ၀တ်စားဆင်ယင်မှုကြောင့် သင်ဇာဝင့်ကျော်ကို ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးက ခေါ်ယူတွေ့ဆုံမည် (7 Days)
ကဲကြည့်။ ဥက္ကဌမှ မဖြစ်သေးဘူး ဦးဇင်ဝိုင်းကြီးတို့ကတော့ လုပ်ပြီ။
သင်္ကြန်တွင်းမှာ မိန်းကလေးတော်တော်များများ Sexy ဖြစ်စေမယ့် ၀တ်စားဆင်ယင်မှုတွေနဲ့ ဘီယာလေး အရက်လေး နည်းနည်းပါးပါး သောက်ကြစားကြ၊
ပြီးတော့ ကားခေါင်မိုးပေါ်တက်ပြီး ကနေလိုက်ကြတာ ကြည့်လို့တောင်ကောင်းသေး ဟေးဟေး။ အခုတော့ သင်ဇာဝင့်ကျော်လေးကျကာမှ ခေါ်ပြီး သတိပေးမယ်ဆိုတာတော့ နည်းနည်းလေးများလွဲနေသလားလို့။ သင်ဇာဝင့်ကျော် နောက်ကို ခေတ်ကလိုက်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ခေတ်နောက်ကို သင်ဇာဝင့်ကျော်ကလိုက်နေတာပါ။ သင်ဇာဝင့်ကျော်တစ်ယောက်တည်းကို ခေါ်သတိပေးယုံနဲ့တော့ ယနေ့ခေတ်မိန်းမငယ်တွေရဲ့ ၀တ်စားဆင်ယင်မှု ရေစီးကြောင်းကြီးကို ပြောင်းပစ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရည်ရွယ်ချက်က ဘာများပါလိမ့်။ အို ဦးနှောက်စားပါတယ်ဗျာ။ ကောင်မလေးတွေကို ဒီလိုသာ ဆုံးမလိုက်ပါ။
ကဲချင်သလိုကဲကြ။ တစ်နေ့ ယူမယ့်ယောက်ျားပေါ်လာလိမ့်မည်။
မောင့်ချစ်သူ နွယ်နွယ်ထွန်း (8 Days)
တစ်မျိုးမထင်ပါနဲ့ ကျောင်းဒကာရယ်။ ဟိုတုန်းက ကျော်ဟိန်းနဲ့ ခင်သီတာထွန်းတို့ရဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနာမည်ပါ။
ပြောချင်တာက နွယ်နွယ်ထွန်း ဆိုတဲ့ Photo Model မလေးတစ်ယောက် အကြောင်းပါ။
အင်မတန် Sexy ဖြစ်သော ဓါတ်ပုံလေးတွေနဲ့ နာမည်ကြီးတဲ့ ကလေးမလေးပေါ့။ ကမ်းကြီးခေါ်သလို ခေးလို့သာ ခေါ်လိုက်ချင်တော့တယ် ဟေးဟေး။
အဲဒီကလေးမလေးက ဒီတစ်ပတ်ထုတ် 8 Days ဂျာနယ်ရဲ့ မျက်နှာဖုံးရှင်ပါဗျာ။ တစ်ယောက်တည်းတော့ မဟုတ်ဘူး။ စပါးကြီးမြွေတစ်ကောင်နဲ့ တွဲရိုက်ထားတာပါ။ ခင်ဗျားသ၀န်တိုမယ်ဆိုလည်း တိုစရာပါ ကျောင်းဒကာ။ စပါးကြီးမြွေကြီးရဲ့ ခေါင်းက နွယ်နွယ်ထွန်းလေးရဲ့ နှလုံးသားတည်ရှိရာ ဘယ်ဘက်ရင်အုံပေါ်မှာ မှေးစက်လို့။ စပါးကြီးမြွေကြီးရဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးကိုလည်း နွယ်နွယ်ထွန်းလေးက ပေါင်လုံးကြီး နှစ်ခုကြားမှာ ညှပ်လို့။
အော် မြွေဖြစ်ရတဲ့ဘ၀ ကိုနိုဇိုးမိကြီးဘ၀ထက်တောင် ဇိမ်ကျနေသေး။
ဓါတ်ပုံဆရာကလည်း အေးဇော်မိုး (စက်မှု) ဆိုတော့ Sexy ဖြစ်ရဲ့လားလို့ မေးစရာကို မလိုတော့တာပေါ့ဗျာ။ လက်ခုတ်တီးပြီးအားပေးပါတယ် အေးဇော်မိုးရေ။
အေးဇော်မိုး(စက်မှု) ရဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်ချက် (8 Days ဂျာနယ် မျက်နှာဖုံး)
အဲဒီ နွယ်နွယ်ထွန်းလေးနဲ့ အင်တာဗျူးထဲက နည်းနည်းလောက် ဆွဲထုတ်တင်ပြချင်ပါသေးတယ်ဗျာ။
နွယ်နွယ်ထွန်းအနေနဲ့ ထူးထူးခြားခြား အနုပညာ လှုပ်ရှားမှုမျိုး မတွေ့ရဘဲနဲ့ ဘာကြောင့်နာမည်ကြီးနေရပါသလဲ။
(ရိုက်။ ဟုတ်တယ်။ မေးသင့်တယ်။ ခေး က အလကားနေရင်းကို နာမည်ကြီးနေတာ။ ကိုလင်းဝေကြီး ဆို
နွယ်နွယ်ထွန်းဓါတ်ပုံလေးတွေက မိုက်တယ် လို့ ခဏခဏပြောဖူးတယ်။ ဘာမိုက်တာလဲလို့ ဒီတစ်ခါတွေ့မှ မေးကြည့်ရဦးမယ်)
သမီးလည်း အဲဒါကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် မသိဘူးဖြစ်နေတယ်။ ကိုယ်က ဇာတ်ကားလည်း မရိုက်ဖူးဘူး။ သူများတွေလိုလည်း ပြိုင်ပွဲတွေဝင်မပြိုင်ဖူးဘူးလေ။ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် သီးသန့် Photo Model တစ်ယောက်အနေနဲ့ ရပ်တည်ခဲ့တာပါ။ ထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ လူတွေက ပိုပြီး သတိထားမိတာက ကိုယ့်ရဲ့အရပ်အမောင်းနဲ့ Style တစ်ခုကြောင့်လို့ထင်တယ်။ အခုခေတ်က ကိုးရီးယား စတိုင်လေးတွေ ရိုက်တာများတယ်လေ။ အဲဒီထဲကမှ သမီးစတိုင်က ကွဲထွက်နေတာကြောင့် လို့ ထင်မိတယ်။ အဓိကကတော့ လူတွေပိုသိတာက Photo Model ကြောင့်လို့ ထင်မိပါတယ်။
အော် ခေးရယ်။ အဲဒါကျတော့ ကိုပါလေရာကြီးတို့ ကိုထက်ဝေးတို့ သူရဇော် တို့က သမီးဘာလို့နာမည်ကြီးနေသလဲဆိုတာ ပိုပြောနိုင်မှာပေါ့ကွယ်။
ကဲ ဆရာတို့…။ နွယ်နွယ်ထွန်းလေးက သူ့ကိုယ်သူ ဘာကြောင့်နာမည်ကြီးနေသလဲဆိုတာ မသိရှာဘူးတဲ့။ ပြောပြလိုက်ကြစမ်းပါဗျာ..။ ခေးကို။
အေးဇော်မိုး (စက်မှု) ရဲ့ လက်ရာ နွယ်နွယ်ထွန်း ရဲ့ အလှ ဘလက်ချောက ပြန်တင်ပြပေးတာပါ။
နောက်မေးခွန်းလေးတစ်ခုက ကိုကြီးမိုက်ကြီးတို့အကြိုက်ပဲဗျာ။ ကဲ ဖတ်ကြည့်။
နွယ်နွယ်ထွန်းရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ စိတ်ဝင်စားစရာ အကောင်းဆုံးနေရာက ဘယ်နေရာလို့ ထင်ပါသလဲ။
သမီးရဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးပါပဲ။ နှုတ်ခမ်းလေးက ထူပြီး ထော်တဲ့ အတွက် Sexy ကျတယ်လို့ ထင်တယ်။ သဘောကျပါတယ်။
နှုတ်ခမ်းလေးတွေ၊ နှာခေါင်းလေးတွေ ကို သဘောကျပါတယ်။
အော်ခေးရယ်။ ထူထူလေးနဲ့ ထော်တဲ့ နှုတ်ခမ်းကလေးက Sexy ဖြစ်သတဲ့လား။
ကိုကြီးမိုက်ကြီးကတော့ တစ်ကိုယ်လုံးမှာ ဆွဲဆောင်မှုတွေ ရှိနေတာပါတဲ့။ ဘယ်နေရာမှ ပစ်ရက်စရာ မရှိလောက်အောင် Sexy ဖြစ်နေတာပါတဲ့။
စိတ်ထိန်းပါ ကိုကို။ မမြဲတဲ့အရာတွေပါ…။ အပုတ်ကောင် ရုပ်ဆောင်နေတာပါ။
တီဗီမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ အနာဂတ်မြန်မာပြည် သီချင်းအကြောင်း (ပေါ်ပြူလာ)
အခုတလော တီဗီမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ပေါ်လစီသီချင်းလို့ခေါ်ကြတဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်။
သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန် သမ္မတတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ တစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ် ဂုဏ်ပြုတေးသီချင်းလေးပါ။ နာမည်က အနာဂတ် မြန်မာပြည် တဲ့။
ထူးဆန်းတာက အဲဒီသီချင်းကိုရိုက်ပေးဖို့ ဒါရိုက်တာဝိုင်းကို ကမ်းလှမ်းခဲ့တာပါပဲ။
အဲဒီလိုကမ်းလှမ်းတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒါရိုက်တာဝိုင်းရဲ့ ဖီလင်လေးက ဒီလိုပါ။
သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန် တစ်နှစ်ပြည့် ဂုဏ်ပြုသီချင်းရိုက်ချင်တယ်လို့ လာပြောတယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း အံ့သြသွားတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ အဲဒီအခန်းဖြတ် ဇာတ်ကား၊ ဒီလိုလေးခြစ်တတ်ရင်ရပြီ ရိုက်တဲ့ ဒါရိုက်တာကို ဒီလိုမျိုးကမ်းလှမ်းတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ သမ္မတကြီးရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ပြန်ဖတ်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ တစ်နှစ်တာအတွင်းကို လုပ်ဆောင်ချက်တွေက အရင်ကနဲ့ မတူသလို ခံစားမိတယ်။ ပထမဦးဆုံး ဇာတ်ညွှန်းရေးပြီးတင်ပြခဲ့တယ်။ ပြချင်တာက သမ္မတကြီးရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို အဓိကပြချင်တဲ့အတွက် တကယ်တွေ့ခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အရုပ်တွေ၊ တကယ် ဧရာဝတီမြစ်ဆုံရပ်ဆိုင်းဖို့ အတိအလင်းကြေညာခဲ့တဲ့ရုပ်တွေ၊ ပြီးတော့ အကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးဖို့ ပြောတာတွေ၊ KIA တပ်တွေကို တပ်မတော်က အပစ်အခတ်ရပ်ဆိုင်းတဲ့ အမိန့်စာတွေပြချင်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ပြောပြီးတဲ့အချိန်မှာ ဟိုဘက်ကလည်း ၀မ်းသာစွာလက်ခံတယ်။ ဒီပြောင်းလဲလာတဲ့ တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ရဲ့ သရုပ်ကို သီချင်းတစ်ပုဒ်ထဲမှာ ပေါ်လွင်စေချင်တယ်။ ပါးစပ်ကနေပြောနေလို့ မပြီးနိုင်ဘူး။ တကယ်လက်တွေ့လုပ်နိုင်မှ ဖြစ်မှာလေ။ ဥပမာ-အရင်တုန်းက အကျိုးပြုတေးက တစ်ဖက်စောင်းပြီးရိုက်တာများတယ်။ အဲဒီလိုမျိုးကို မပြချင်ဘူး။ ဒီသီချင်းပုံဖေါ်တဲ့အခါ တံခါးတွေဖွင့်ထားတာရှိသလို တံခါးတွေပိတ်ထားတာမျိုးတွေလည်းပါတယ်။ ဒါက အနုပညာအရေး တွေးကြည့်လို့ရတယ်။ တိုင်းပြည်ကို တံခါးဖွင့်ဖို့ ကြိုးစားနေကြတယ် ဆိုတာမျိုး မြင်တွေ့ရမယ်။ ပြောင်းလဲလာတဲ့ဖီလင်ကို နည်းနည်းတော့ခံစားရပြီ။ အများကြီးတော့ မဟုတ်သေးဘူး။ ဒီထဲမှာ ထူးထူးခြားခြား ကိုမင်းကိုနိုင် ပုံရိပ်တွေကို တွေ့ရမယ်။ ဒါက ပြောင်းလဲလာမှုပဲလေ။ တစ်ဖက်ကတော်တော်များများ ခွင့်ပြုတယ်။ ဒီအရုပ်တွေက အရင်တုန်းက တီဗီဖန်သားပြင်ပေါ်မှာ မြင်ရတာမဟုတ်ဘူး။ အခုစဖေါ်ပြခွင့် ရလာတယ်။ အရင်အခြေအနေထက်စာရင် တော်တော် ပြောင်းလဲလာပါပြီ။ အနုပညာရှင်တွေကလည်း သူညီပေးကြတယ်။ ရိုက်ကူးတာသိတ်မကြာပေမယ့် သမ္မတဦးသိန်းစိန် အကြောင်းကို ပြန်လေ့လာတာ တော်တော်ကြာတယ်။ ခရီးတွေကအစ သေချာလေ့လာခဲ့ရတယ်။ အနုပညာရှင်တချို့ဆို နိုင်ငံတော်သီချင်းရိုက်တဲ့အခါ နိုင်ငံခြားမှာကျင်းပတဲ့ ရှိုးပွဲတွေ မခေါ်တာမျိုးလည်း ရှိတယ်။ အခု ဒီသီချင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်မပူဖို့ပြောရတယ်။ ဒါကလည်း အမှန်တရားတစ်ခုကို တင်ပြတဲ့သဘောပါ။ ကိုယ်တတ်တဲ့အနုပညာနဲ့ သူတစ်ပါးကို စော်ကားချင်စိတ်လုံးဝမရှိပါဘူး။ အခုချိန်မှာ အနုပညာရှင်တွေရဲ့ စိတ်မှာလည်း ဖီလင်တစ်ခုတော့ ရှိကြမှာပါ။ ဒီသီချင်းအတွက် ပရိသတ်ကို နားလည်စေချင်တယ်။ လူတစ်ယောက်ကို နားလည်မှုရှိရမယ်။ ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲ။
ပေါ်လစီသီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ဖန်တီးဖို့ ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သားလို့ ပြောလို့ရတဲ့ ဒါရိုက်တာ ၀ိုင်း လက်ထဲထည့်တယ်ဆိုတာကိုက အပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်နေပါပြီဗျာ။
သံစဉ်ပိုင်းမှာတော့ Chorus ပိုဒ်လေးက ဒွေး ရဲ့ အဖြူရောင်သစ္စာ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားထဲက ဒွေးဆိုထားတဲ့ ဇာတ်ဝင်တေးနဲ့ တစ်ထပ်တည်းတူညီနေသလားလို့ပါ။ သမ္မတ ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့သီချင်းတစ်ပုဒ်ဆိုတော့ အပြစ်အနာအဆာ ကင်းစေချင်တဲ့သဘောပါဗျာ။
NLD မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်ဖြူဖြူသင်းကို ကြံ့ခိုင်ရေးကိုယ်စားလှယ်လောင်း ငွေ၁၀ သိန်းတင် တရားစွဲ (Venus)
ပြည်သူလူထုရဲ့ သဘောထားဆန္ဒအမှန်ကို လက်မခံနိုင်တာလား။
ဖွဲမီးလို တောက်လောင်နေတဲ့ အာဃာတတွေကြောင့်လား။
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်မှ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရထားတဲ့ NLD ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ဖြူဖြူသင်းကို ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီရဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဒေါ်လဲ့လဲ့အေးက ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲမသမာမှုများ ပြုလုပ်သည်ဟုဆိုကာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံတွင်
ငွေကျပ် ၁၀ သိန်း တင် တရားစွဲဆိုလိုက်ပါတယ်တဲ့ ကျောင်းဒကာရေ။
နည်းနည်းမှကို မလျှော့ဘူးဗျို့။ စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့ဗျာ… နော။
ဒီမိုကရေစီရမှာကိုတောင် ကြောက်မိတယ် တဲ့ (Sunday)
သရုပ်ဆောင်ဒါရိုက်တာ ကိုပေါက်က လက်ရှိနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောသွားတဲ့စကားလေးပါ။
ကျွန်တော်က ဒီမိုကရေစီရမှာကိုတောင် ကြောက်မိတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ လုပ်ချင်တာကိုလုပ်၊ စည်းမရှိ ကမ်းမရှိ ဖြစ်နေတဲ့
လူတန်းစားက အရမ်းများတယ် လို့ ထင်တယ်။ ကိုယ့်တိုင်းပြည် ကိုယ့်လူမျိုးကို တိုးတက်အောင်လုပ်ပေးမယ့်သူ ဆိုရင်တော့ ဘယ်သူ့ကိုမဆိုကြိုဆိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီမိုကရေစီမရသေးတဲ့အခြေအနေမှာတောင် ပြောချင်တာတွေပြော၊ လုပ်ချင်တာတွေလုပ်လာတာကိုက စိတ်ပျက်စရာဖြစ်နေတယ်။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော် ဒီမိုကရေစီရမှာကိုတောင် စိုးရိမ်နေမိတယ်။
ကဲ။ စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ ဒီမိုကရေစီတွေကို စိတ်ကုန်နေပုံရပါတယ်။ အသာလုပ်ပါဗျာ။
တော်ကြာ မလိုချင် ပြန်ပေးဆိုပြီး ပြန်ယူသွားမှ ဟုတ်ပေ့ဖြစ်နေဦးမယ်… လူဆိုး။
စာနယ်ဇင်းသမားဆိုတာ နှောင်ကြိုးမဲ့ နိုင်ငံရေးသမား – လူထုစိန်ဝင်း
ဆရာလူထုစိန်ဝင်းရဲ့ စာနယ်ဇင်းသမားဆိုတာ နှောင်ကြိုးမဲ့နိုင်ငံရေးသမား ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးပေါင်းချုပ် စာအုပ်လေးထွက်လာပါတယ်။
စာနယ်ဇင်းသမားဆိုတာ နိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံရေးသမားများလိုပဲ နိုင်ငံအရေး၊ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအရေးကို တစ်နည်းတစ်ဖုံ
ဆောင်ရွက်သူတွေဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံရေးသမားကမှ သူ့ပါတီအဖွဲ့အစည်းရဲ့ အကျိုးကို ဆောင်ရွက်ရပါသေးတယ်။ စာနယ်ဇင်းသမားကတော့ စာဖတ်ပရိသတ်
ပြည်သူလူထုရဲ့ အကျိုးတစ်ခုတည်းကိုသာ ကြည့်ပြီးလုပ်ဆောင်ရပါတယ်။ ဘယ်နိုင်ငံရေးပါတီ၊ ဘယ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းရဲ့ အသုံးချခံ လက်ကိုင်တုတ်လည်း
အဖြစ်မခံရပါဘူး။ စာနယ်ဇင်းသမားလည်း လူသားတစ်ဦးဖြစ်လို့ ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်မှု၊ ကိုယ်ပိုင်တိမ်းညွတ်မှုတို့ရှိမှာ အမှန်ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့်
သတင်းလုပ်ငန်း လုပ်ရာမှာတော့ ကိုယ့်အတ္တနောမတိကို ထိန်းချုပ်ပြီး အဖြစ်မှန်၊ သတင်းမှန်ကိုသာ ရေးသားဖေါ်ပြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တည်ကြည်ဖြောင့်မတ်ပြီး အမှန်တရားကိုသာ ဖေါ်ထုတ်တင်ပြတဲ့ စာနယ်ဇင်းမျိုးကိုမှ “စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်” လို့ သတ်မှတ်နိုင်တာပါ။ စာနယ်ဇင်းတစ်စောင်ရဲ့
နေရာ ကို သတ်မှတ်တာက စောင်ရေဘယ်လောက်အများကြီး ရိုက်ရသလဲ၊ ဘယ်လောက်လူကြိုက်များသလဲ ဆိုတဲ့အချက် မဟုတ်ပါဘူး။ စာဖတ်ပရိသတ်
ပြည်သူလူထုရဲ့ ယုံကြည်ကိုးစားမှု ဘယ်လောက်ခံရသလဲဆိုတဲ့အချက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီခေတ် လူငယ်စာနယ်ဇင်းသမားများ ဒီအချက်ကို အထူးသတိပြုသင့်ပါတယ်။
စာနယ်ဇင်းသမားဆိုတာ ဘယ်အနှောင်အဖွဲ့မျိုးမှ မခံတဲ့ “နှောင်ကြိုးမဲ့ နိုင်ငံရေးသမား” ဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံ့အရေး၊ နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများရဲ့ အရေးကို တည်ကြည်ဖြောင့်မတ်စွာ
ဆောင်ရွက်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလူမျိုးကိုမှ စာနယ်ဇင်းသမားကောင်း လို့ ခေါ်နိုင်တာဖြစ်ကြောင်း လူငယ်တွေ သိစေချင်ပါတယ်။
ပုဂံလက်ကျန် ဓါတ်ပုံလေးတွေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
@ Tin Tin ;
ကွန်းမန့်လေး ၀င်ချီးမြှင့်ပေးတာ ကျေးဇူးပါ တင်တင်ရေ။
အဲ တင်တင်လား တင်းတင်းလား တော့ မသိလို့ တင်တင်ပဲ ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဗျာ။
သာဓု သာဓု သာဓုပါ။
အေးဆေးပဲ နော် ရေနွေးကြမ်းအိုး နဲ့ ထောင့်ခုံ မှာ ငြိမ့်ငြိမ့် လေး ခံစားသွားပါကြောင်း …… လက်မ တစ်ချောင်း နဲ့ .. ဂုဏ်ပြု ခဲ့ပါကြောင်း ….
ချိုပေါ့ကျ ကို ဖတ်ပါ လို့ ရေးရမလိုတောင် ဖြစ်လာပြီ
ဒီတစ်ပတ် အကျရည် ပေါ့ထားတော့ အစ်ကိုတို့လို
လဖက်ရည်ကြိုက်သူတွေအတွက် နည်းနည်း ပေါ့နေမယ်ထင်ပါတယ်။
တကယ်ပြောတာပါဗျ။ ဂီဂီ့ကိုလည်း မေးကြည့်လို့ရပါတယ်။
အစ်မက ကျွန်တော့် ထက်ငယ်တယ်လို့တောင် ထင်ရတာပါ။
အမှန်ကတော့ ကျွန်တော်ကလည်း အရွယ်ကျတာ မြန်နေတာဖြစ်ကောင်း
အစ်မကွန်းမန့်ကို ဖတ်ရင်း Best Comment ကိုမနှိတ်မိအောင် အကြိမ်ကြိမ်
ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ပို့စ်လေးကို သေချာဖတ်ပြီး သေချာပြန်ရေးထားတယ်ဆိုတာ
သိသာလွန်းနေတော့ ဟယ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်
နှိတ်လိုက်ပြီဗျာ Best Comment ။
မြွေကိုမြင်တော့ ရင်တုန်ပန်းတုန် ဖြစ်သတဲ့လား ကိုနေကြီးရယ်။
@ ကိုထွန်းဝင်းလတ် ;
ကွန်းမန့်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါ ကိုထွန်း ၀င်း လတ်ရေ။
ကျွန်တော်ပြောချင်တာ ပြချင်တာလည်း အဲဒါပဲ FR ကြီးရေ။
အော် သင်ဇာဝင့်ကျော် သင်ဇာဝင့်ကျော်
ကို Black Chaw ရေ
ဂီဂီ က ဘယ်တော့ အရှေ့ကျွန်း ပြန်မယ်တဲ့တုံး ။
ဂီဂီ အရှေ့ကျွန်း မပြန်ခင် တရက်လောက်တော့ တွေ့လိုက်ချင်သား ။
ကော်ဖီအိပ်မက်တော့ စွန့်လွှတ်လိုက်ပီ ဖြစ်ပါသည်..
Sorry ဂီဂီရေ ၊
၅ ရက်နေ့ ( မေလ ) ဆိုရင်တော့ ၊
အဘ ပြန်မရောက်လောက်သေးဘူးကွယ့် ။
@ Mလုလင် ;
အရာအားလုံးအတွက် ကျေးဇူးပါ ညီလေးရေ။
ညီလေးကို ဘုရားသခင် ကောင်းချီးပေးမှာပါဗျာ။
အူးလေး ချိုပေါ့ကျကို ခဏခဏ ကြည့်….အဲလေ…ဖတ်ချင်နေမိတယ်ဗျား
ကော်မကောင်းလို့ စိတ်ရှိသလောက် သိဒ္ဒိမပေါက်လို့ပါ
လက်မထောင်ကာ အားပေးသွားပါကြောင်း .. ဆရာရေ
ဖတ်လို့ကကောင်းမှကောင်း၊ ကိုယ့် Comment ကြောင့်
ကိုချောပြောတဲ့ Marketing ကိစ္စ။
Goods တွေ မထုတ်လုပ်ပေမဲ့ Services တွေ ထုတ်ရောင်းရတာကိုး။
(၁) Image တစ်မျိုး ရှိရမယ်။
(၂) Brand Building ပိုင်းနားလည်ရမယ်။
(၃) ပို အောင်မြင်မယ်အောင် BRANDING is PROMISING ဆိုတာမျိုးလေး
စသဖြင့်တွေ တွေးကြည့်မိတယ် သိလား။
Image ပိုင်း။ ။ မျက်နှာထားခပ်တင်းတင်း၊ မြင်ရာလူ ဆုံးမချင်နေတဲ့ရုပ်။
Brand Building။ ။ လူမသိသူမသိ ၊သတင်းစာထဲမှာကြော်ငြာမထည့်။
Service။ ။ စာမတတ်တတ်အောင်သင်တာကလွဲလို့ ဘာလောကွတ်မှ မပြောဖြစ်ခဲ့။
ကိုချောရေ… ဒီလိုဆိုရင် တီချာ့လုပ်ငန်းလေး ကမ္ဘာကျော်ပါ့မလားဟင်။
လက်မထောင်သွားရုံနဲ့တော့ မကျေနပ်နိုင်ဘူး ကိုသော့ရေ။
ဓါတ်ပုံလေးတွေ အကြောင်း နည်းနည်း ပြောပြပေးစေချင်သေးတာ။
ကျွန်တော်က အပျော်သဘော ရယ်ရွှင်စေချင်တဲ့စိတ်နဲ့
Branding is Promising ဆိုတာကတော့
တီချယ်ကြီးရဲ့ တပည့်ဟောင်းတွေက တီချယ်ကြီးရဲ့
ကြော်ငြာမီဒီယာတွေလို့ ထင်မိပါတယ်ခင်ဗျာ။ (ထင်မိတာပါနော်)
ဆိုက်ကားသမားတွေ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဘယ်လိုကြော်ငြာနိုင်ကြပါ့မလဲ။
သူတို့ရဲ့ အပြုအမူ၊ အပြောအဆို၊ စတာလေးတွေက ပဲ
သူတို့ရဲ့ image ကို ပုံဖေါ်သွားတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
တစ်ချို့ က ချိုသည်။
တစ်ချို့ က ပေါ့ သည်။
တစ်ချို့ က ကျသည်။
ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်ကတော့ စိမ့်စိမ့်လေး အရသာခံစားသွားသည်။
လေးဘလက် ဖြစ်နိုင်ရင် ပုဂံ ဘုရားပုံတွေကို မင်းသမီးပုံတွေရဲ့ အပေါ်ကို ပြောင်းတင်ပေးပါလား။
ကြည့်ရတာ တစ်မျိုးဖြစ်နေသလား လို့။
ဘယ်လက်မ ညာလက်မ ကိုအပြိုင်ထောင်ပြီး အားပေးသွားပါတယ် ကျောင်းဒကာရေ အဲ ကိုချောကြီးရေ။
နောက်ကျနေလို့ ကျန်မှ ကျန်ပါ့ဦးမလားလို့။
ကွန်မန့် မပေးနိုင် ဖြစ်နေတာ။
ချိုပေ့ါကျမြင်တော့ မနေနိုင် ဖတ်ရ မန့်ရ တော့တာပဲ။
ကိုချောရေ- ဒီတခါ ချိုပေ့ါကျက ကျောက်ပန်းတောင်းဂိတ်ဆုံးဖြစ်နေပါပေါ့လား။
ကျမလည်း ကိုဘလက်ရောင်းခိုင်းတဲ့ ဂျာနယ်တွေ မြောင်းမြ မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်ရှေ့သွားရောင်းပြီး ကုန်မှ ရွာလည်နိုင်တာမို့ နောက်ကျနေတာ မမရေ
်မအားတာနဲ့မလှည့်နိုင်ဖြစ်နေတာ ဒီတခါ ချိုပေါ့ကျကိုလည်း အားပေးသွားပါတယ်နော်။
ဒီတခါတော့ ပိုပြီး အရသာစုံတယ် ရှယ်ချိုပေါ့ကျပေါ့
ကိုယ်ပိုင် Brand ရှိတဲ.သူတွေကိုအားကျပါသဗျာ ….လွယ်တာမှတ်လို. ။
ဆယ်ဘီးကားနဲ.၀င်တိုက်မိထားတဲ. QQ3 ချယ်ရီဝါဂွန်ကို ပတ်တီးဖို.ပြီး ဆေးမှုတ်ထားသလို
ကြည်.ရတာ လျော.တော.တော.နဲ. ..ဟင်း …..။
(နောက်နေ.မှ ထပ်မန်.ဦးမယ် ….အချိန်မရတော.လို.)
@ R Ga ;
ညီလေးရေ။ အောက်ဆုံးက ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ဓါတ်ပုံလေးတွေ
ကိုယ်ပိုင်အနုပညာလေးတွေ ရဲ့ နေရာလေးပါ။
ကြားထဲမှာထည့်ထားတာက စမ်းသပ်ထားတဲ့ သဘောပါ။
နောက်များမှာ ဓါတ်ပုံလေးတွေ ပါ တွဲတင်ဦးမယ့် သဘောပေါ့။
ဘုရားက ဘုရားခန်းထဲမှာ ရှိနေတယ်လို့ သဘောထားပေးပါဗျာ။
ကဗျာဆန်ဆန်ပေးတဲ့ ကွန်းမန့်လေးအတွက် တစ်ဆယ်ယူစေဗျား။
@ အိမ်လွမ်းသူ ;
ဆိုင်ကယ်နှစ်စီး အပရိုင်စီး ဆိုတဲ့ ဟာသလေးသွားသတိရမိပါသေးတယ်ဗျာ။
မမရဲ့ ကွန်းမန့်ကို မျှော်နေမိတာ ၀န်ခံပါတယ်။
ဒီတစ်ခါ ကျောက်ပန်းတောင်းတောင် ဂိတ်ဆုံးလောက်ဖြစ်သွားပါတယ်။
အကျရည်များတယ် ဆိုကြလို့ သောက်သူတွေ နည်းနည်းအပြောင်းအလဲဖြစ်အောင်
မမ တို့မြို့က အလှူပွဲကို မလိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်
မမကို အနူးအညွတ် တောင်းပန်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခါတော့ ခရစ်ယာန်တွေ ပြောသလိုပြောခွင့်ပြုပါ မမရေ။
အရာအားလုံးဟာ ဘုရားသခင်အလိုတော်အတိုင်းပါ ခင်ဗျာ။
နောက်ကျနေတဲ့ ကွန်းမန့်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါဗျာ။
ချိုပေါ့ကျ က တစ်ခုခုကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲစေနိုင်လောက်အောင်
ဖတ်လိုက်တဲ့ ခဏမှာ ဖတ်သူကိုယ်တိုင်မသိလိုက်ပဲ
လက်ဘက်ရည်ဝိုင်းကိုအရောက် နောက်ကျနေမိတာ တောင်းပန်ရင်း.
ခါတိုင်းလို အရသာခံပြီး မသောက်နိုင်ဘဲ အပြေးအလွှားသောက်ရတာကို.
Branding Building တည်ဆောက်ပုံလေးနဲ့ ဂန္တ၀င် ပုဂံကို ရိုက်ချက်တွေကတော့..
အနှစ်သက်ဆုံးမို့ ထုံးစံအတိုင်း လက်ကလေးထောင် အားပေးသွားရင်း.
ကိုဘလက်ရဲ့ မျက်နှာငယ်နေရတဲ့ ကံကြမ္မာလေး.
ငယ်ရာမှ ပြန်ကြီးလာဖို့ကိုလဲ မျှော်လင့်ပါကြောင်း..လို့
တစ်မိနစ် နောက်ကျနေပေမယ့် ကားကြီးကထွက်လို့မသွားသေးပါဘူး ညီလေးရေ။
မျက်နှာငယ်နေတဲ့ ကံကြမ္မာလေး အတွက်
အော် အခုတလော ဘုရားသခင် ဘက်ပဲ စိတ်ရောက်နေတယ်။ ဟီး။
အို….ဘုရားဒကား ရဲ့ချိုပေါ့ကျ ဖျော်စပ်ပုံ ကောင်းသလို..
သင်ဇာဝင့်ကျော် နောက်ကို ခေတ်ကလိုက်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ခေတ်နောက်ကို သင်ဇာဝင့်ကျော်ကလိုက်နေတာပါ။ သင်ဇာဝင့်ကျော်တစ်ယောက်တည်းကို ခေါ်သတိပေးယုံနဲ့တော့ ယနေ့ခေတ်မိန်းမငယ်တွေရဲ့ ၀တ်စားဆင်ယင်မှု ရေစီးကြောင်းကြီးကို ပြောင်းပစ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရည်ရွယ်ချက်က ဘာများပါလိမ့်။ အို ဦးနှောက်စားပါတယ်ဗျာ။
သူကသရုပ်ဆောင်ဆိုတော့ အစည်းအရုံးက ခေါ်ပြောတာထားပါတော့
နို့ပေသည့် သရုပ်ဆောင်တွေ မော်တာဂဲတွေဝတ်တာ အကုန်ဆိုးတာပဲ
ဟိုတလောက ရွှေဆိုင်တစ်ခုကပွဲတုန်းကဆိုရင် နာမည်၂လုံးနဲ့ မော်တာဂဲက ဇကာပေါက်ဆိုလား ပါးပါးရှပ်ရှပ်လေးဆိုလား အင်္ကျီဝတ်လာတယ်ဆိုပဲ
အထဲက အောက်ခံတော့ ထင်းကနဲ ၀င်းကနဲတဲ့
ပြာသိုလဆိုရင် ကြောင်ကြီးကို sexy ဖြစ်တယ်လို့ ကြောင်မတွေကပြောဂျဒယ်။
နောက်လည်း ၀င်ဖတ်ရင် ကြုံသွားပါဦးခင်ဗျာ။
မမြင်ရတာ အတော်တောင်ကြာပြီနော် ပန်ပန်ရေ။
ကြုံလို့ အချိန်ရရင် အခုလိုပဲ ၀င်ဖတ်ပြီး
ပြီးတော့ ပို့စ်လေးတွေလည်း တင်ပါဦး လို့ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
ကြောင် ၀တ်မှုန်ရွှေရည် တို့အားလုံးနဲ့
ကြောင့် ပွင့် ကြီးကိုတော့ သတိထားပါ ခင်ဗျာ။
အဲ့ … မိန်းမဆိုတာ ယူရတာ မဟုတ် ..ပေးရတာ..
နောက်ပီး … ခုန်ချပြန်ဘီ ဖြစ်ဦးမယ်….
မိဘစကားနားမထောင်တာကိုက .. အနုပညာဖြစ်နေပြန်ပါပကောလား
လုပ်ကြပါဦး အရပ်ကတို့ ရေ ကွန်မန့်တွေ မဆန့်တော့လို့….နောက်ထပ် ကွန်မန့်တွေ ထပ်ဖတ်လို့ မရတော့ဘူး။။။ လေးဘလက်ရေ..ဘယ်ရိုရုတ်ကျမတုံး..။ အနော် လေးဘလက်ရဲ့ ချိုပေါ့ကျကိုဝယ်မယ်ဗျာ…။ အတည်ကျောတာနော့…။
ဒါမှ ငါ့ကိုလည်း ကြော်ငြာထဲထည့်ပေးမှာ။
sexy ဖြစ်အောင်ထိမ်းထားနိုင်တဲ့ ဘကြီးဆိုပြီး၊ ညှင်း ညှင်း ညှင်း။
ဒီဆိုက်ထဲမှာ ဒီပို့စ်ထက် ကွန်းမန့်များတဲ့ ပို့စ်တွေ အများကြီးပါကွာ။
ကွန်းမန့်က ရှစ်ဆယ်ကျော်ပေမယ့် ကိုယ် ပြန်ပေးတဲ့ ကွန်းမန့်က ဒီတစ်ခုပါရင် ၃၆ ခု ရှိပါတယ်။
ကွန်းမန့်တွေများအောင် ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့
တစ်ယောက်ခြင်းစီ ပြန်နေတာမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူးနော်…။
တကယ်ကို တစ်ယောက်ခြင်း လေးလေးစားစား တုန့်ပြန်ချင်လို့
ကွန်းမန့်များများရတယ် ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ထက်
ဖတ်သူတွေရင်ထဲရောက်တယ်ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ကို ပိုနှစ်သက်ပါတယ်။
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း သူများပို့စ်တွေမှာ ကွန်းမန့်ဝင်ပေးရင်
လေးလေးစားစား တုန့်ပြန်မှုကို လိုချင်တဲ့စိတ် ဖြစ်မိပါတယ်။ …အဲဒါကြောင့်ပါ။
သုံးခါတိတိ ၀င်ပေးတဲ့ ညီလေးရဲ့ ကွန်းမန့်တွေအတွက် ကျေးဇူးပါညီလေးရေ။
နောက်တစ်ခါ ချိုပေါ့ကျ လေး လာသောက်ရင် ညီလေးရဲ့ အိမ်သူကိုလည်း
@ ba gyi ;
ဘကြီးရေ။ ကွန်းမန့်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ ဗျာ။
ဒီအထဲ ထည့်ရေးနေဖြစ်တဲ့ မိတ်ဆွေ ရေးဘော်ရေးဘက်တွေအားလုံးက
စိတ်မဆိုးကြမှာသေချာတဲ့ ရင်းနှီးမှုမျိုးရှိလို့ ထည့်ရေးရဲတာပါ။
ဘာလို့ဆို တချို့က စတာနောက်တာကို သိတ်မကြိုက်ကြဘူးလေ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘကြီး sexy ဖြစ်ကြောင်းကိုတော့
ဒီတစ်ပတ် ကော်ဖီသောက်ဖြစ်ရင် ပြောပြပေးလိုက်ပါ့မယ်ခင်ဗျာ။